Enza ngendlela oyifisayo i-WordPress Jetpack Shortcode Widths | Martech Zone
Yenza ngokwezifiso i-WordPress Jetpack Ububanzi bekhodi emfushane
NgoLwesine, Agasti 29, 2013 NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2015 Douglas Karr
Lapho i-WordPress ikhipha Jetpack i-plugin, bavula ukufakwa okujwayelekile kwe-WordPress kufinyelela kwezinye izici ezinhle abazifaka kusixazululo sabo abasingethwe. Lapho usunike amandla i-plugin, unika amandla ithoni yezici, kufaka phakathi wokunqamulela. Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress ayivumeli umbhali wakho ojwayelekile ukuthi engeze ukubhala imidiya ngaphakathi kokuqukethwe kweposi noma ikhasi. Lesi isici sokuphepha futhi senzelwe ukunciphisa amathuba wokuphazamisa isiza sakho.
Noma kunjalo, ngama-shortcode, umsebenzisi wakho angafaka imidiya kalula. Isibonelo, ukushumeka ividiyo ye-Youtube, asikho isidingo sokwengeza iskripthi sokushumeka - umane ufake i-URL eyabiwe kuvidiyo kusihleli sombhalo. Ukuhlanganiswa kwama-shortcode kukhomba indlela bese kufaka i-URL esikhundleni sekhodi yangempela yevidiyo. Akukho mpikiswano, azikho izingqinamba!
Ngaphandle kweyodwa. Usebenzisa ama-shortcode, ububanzi bemidiya yakho eshumekiwe buzenzakalelayo nje. Ngakho-ke i-Youtube inganweba ngaphezu kobubanzi bokuqukethwe kwakho iphinde ichitheke kubha yakho eseceleni - noma iSlideshare ingathatha ingxenye yesikhala ebingasithatha. Ngichithe amahora ambalwa ngizama ukuthola ukuthi ungabhala kanjani ezinye izihlungi ukwenza iphutha ububanzi besinqamuleli ngasinye. Ngibuyekeze ithani lama-plugins ukubona ukuthi ngabe belikhona yini vele lapho.
Ngibe sengikuthola… ukuguqulwa okukhazimulayo okuncane okwengezwe yiWordPress ku-API yabo. Isethingi lapho ungabeka khona ngokuzenzakalela ububanzi bokuqukethwe emakhasini akho nakokuthunyelwe:
uma (! isset ($ content_width)) $ content_width = 600;
Lapho nje sengisetha lobu bubanzi kufayela lengqikithi yami le-works.php, yonke imidiya yesinqamuleli eshumekiwe yakhuliswa kahle. Ngenkathi ngijabule ukuthi kuthathe umugqa wekhodi kuphela, ngine-frazzled enkulu yokuthi kuthathe isikhathi eside ukuthola lokhu. Okuthakazelisa nakakhulu ukungabikho kokwenza ngokwezifiso okutholakalayo nge- Jetpack. Ama-shortcode, ngokwesibonelo, awakwazi ukukhutshazwa - anikwe amandla inqobo nje uma i-plugin inikwe amandla.
Bekungaba kuhle kakhulu, ngokwesibonelo, ukwengeza okuphezulu ububanzi nokusetha ukuphakama ngqo kwi Jetpack Izilungiselelo ze-Shortcode. I-WordPress iyi-platform enhle kakhulu, kepha kwesinye isikhathi ukuthola isixazululo kungakhathaza kakhulu!
Tags: ukuphakamaJetpackikhodi emfushaneububanzi be-slideshareububanzi be-vimeoububanziWordPressububanzi be-youtube
Nikeza isiza sakho se-WordPress Ukuvutha okuthile
Ukuphathwa Komphakathi Kwenziwe Ngakwesokudla